खेल Pokemon जानुहोस् गेमिङ उद्योग मा एक सफलता थियो। हालैका वर्षहरूमा, तपाईं एक यस्तो सफल परियोजना पनि मानवता को दिमाग उडायो कुन नाम सक्दैन। यो खेल पहिले नै लिखित पर्याप्त छ, र त्यहाँ व्याख्या गर्न कुनै आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई के Pokemon को जाओ। अब हामी कसरी "Pokemon जाओ" मा सिक्का बनाउन कुरा हुनेछ। यो सानो गाइड हामी मुद्रा उत्पादन को सबै तरिका बारे भन्नेछु, साथै खेलको रहस्य केही पत्ता लगाउन।
pokekoins के हो?
तपाईं कसरी "Pokemon जाओ" मा सिक्का बनाउन सिक्न अघि, गरेको यो के हो हेर्न दिनुहोस्। Pokekoins सिक्का खेलाडीहरूलाई कल गर्न प्रयोग गरिन्छ - यो खेल मुद्रा, जसको लागि तपाईंलाई उपयोगी र-यति कुरा एक किसिम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, "Pokemon जाओ" डाउनलोड र कुनै पनि निवेश बिना स्थापना गर्न सजिलो छ कि एक मुक्त खेल हो। र तपाईं खेल को प्रारम्भिक चरणमा एकदम सिक्का जहाँ प्राप्त गर्न इच्छुक हुनेछन्। प्रारम्भिक उपलब्धिहरू पछि धेरै सजिलो र pokekoinsy आफूलाई जम्मा। तर एक समय पछि किनभने बिना यो मुद्रा खेल जारी गर्न असम्भव छ, सुन को एक तीव्र कमी महसुस हुनेछ। र यहाँ तपाईं "Pokemon जाओ" मा सुन सिक्का कमाउन कसरी लाग्छ? त्यहाँ धेरै तरिका यो मुद्रा उत्पादन हो, र ती सबै तपाईंले सिक्न हुनेछ।
तपाईं यो बहुमूल्य स्रोत को भरना helpfully खेल नै गर्न प्रस्ताव। जहाँ एक भद्र योगफल लागि, तपाईंले केही सिक्का किन्न सक्नुहुन्छ स्टोर, जान सजिलो तरिका हो। 100 सिक्का खरिद तपाईं एक डलर खर्च हुनेछ। तपाईं थोक मा सुन किन्न निर्णय भने, त्यसपछि यो सम्झौता धेरै लाभदायक हुनेछ। तर तपाईं खेल मा वास्तविक पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन् भने त, धेरै हुन आवश्यक सिक्का, त्यसपछि के तपाईं कसरी निःशुल्क "Pokemon जाओ" मा सिक्का कमाउन सक्नुहुन्छ सिक्नुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
खेल मा सिक्का कमाउन "Pokemon जाओ" महत्वपूर्ण स्थानहरू, जो ठाँउहरु र मान्छे को जमघट अन्य स्थानहरू समावेश भ्रमण गर्दा हुन सक्छ। पोर्टल यी प्रकारको तपाईँको खेल नक्सामा मार्क, र तपाईं तिनीहरूलाई नजिक प्राप्त आफ्नो रंग परिवर्तन गर्न। PokeStop सक्रिय, तपाईँले "Pokemon जाओ" को खण्ड लागि आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरण को पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। केही अन्डा र Pokémon जोडी pokebolov एक: तपाईं अझै पाँचौ स्तर पुग्न व्यवस्थित छ भने, तपाईं धेरै छैन perepadet। तर त्यसपछि पुरस्कार स्वास्थ्य र सिक्का सहित केही अन्य वस्तुहरू, Replenish गर्न औषधि थपिनेछ, खुसी अन्डा। तर, दुर्भाग्य, सुन छैन अक्सर हामी चाहनुहुन्छ रूपमा पर्छ।
कसरी "Pokemon जाओ" मा सिक्का कमाउन मुख्य तरिका - सुरक्षा र पकड जिम छ। यस्तो ठाउँमा किनभने तिनीहरूले जस्तै, उच्च-वृद्धि एक नेता-शीर्ष Pokémon संग भवन हेर्न, नक्सामा बाहिर सम्झना छैन। टोलीमा कोठा मालिक के, संरचना को रंग बताउनुहोस्। यो भवन विरोधीहरूले वा मित्र पर्छ कि, तपाईं मात्र 5th स्तर पछि निर्णय गर्न सक्षम हुनेछ। आखिर, त्यसपछि मात्र तपाईं जो टोली हौं हुनेछ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
खेल मा तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ किनभने छैन मित्र समूह चयन गरेर, धेरै गम्भीर नजिक हुनुपर्छ। प्रत्येक टोली यसको आफ्नै विशेषताहरु र क्षमता, जिम को सुरक्षा को सफलता मा हदसम्म निर्भर जो छ। उदाहरणका लागि, रातो वा वीरता बलियो Pokemon पम्पिंग विशेषज्ञ। खेलाडीहरू रहस्यवादी नीलो टोली वा विकास लागि थप अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्। एक पहेंलो वा Instinct अन्डा कोरलिँदै लागि बोनस प्राप्त।
भवन मित्र को एक समूह द्वारा स्वामित्व छ भने, त्यसपछि तपाईँले सजिलै आफ्नो पाल्तु जनावर गर्न, राख्न सक्छ हल त्यहाँ खाली सिट छन् कि प्रदान। तपाईं स्क्रीन अनुरूप विकल्प तल्लो बायाँ कुनामा त्यसपछि Pokemon, राख्न सक्छ भने। सीपी को एक उच्च स्तर भएको सबैभन्दा शक्तिशाली Pokémon चयन गर्न हल राम्रो सुरक्षा गर्न - यो सफलता को मौका वृद्धि हुनेछ। यो पाल्तु जनावर तपाईं 10 सिक्का लागि हरेक 21 घण्टा सङ्कलन गर्न अनुमति दिन्छ जो भवन, सुरक्षा बृद्धि हुनेछ, तपाईं हल लगिएको छैन भनेर प्रदान।
तपाईं एक भवन एक प्रतिद्वन्द्वीको स्वामित्वको हेर्न भने, तपाईं यसलाई जीत प्रयास र आफ्नो टीम को रंग मा repainted गर्न सक्नुहुन्छ। आँधी गर्न एक्लै वा मित्र को कम्पनी मा त हुन सक्छ। एकै समयमा यो सबै शत्रु पाल्तु जनावर को निर्माण stripping पछि विजय तिर गणना। यो कोठा तटस्थ छ र तपाईं चाँडै Pokémon राख्नुपर्छ पछि, अन्यथा तपाईं poachers अगाडी प्राप्त गर्न सक्छन्।
आफ्नो पाल्तु जनावर हल मालिक भएको छ एक पटक, तपाईं, 21 घण्टा प्रतीक्षा गर्न त खेल पसलमा जाने र सानो बोर्ड मा क्लिक गरेर आफ्नो बोनस छनोट अप गर्न आवश्यक हुनेछ। एक इनाम रूपमा मात्र होइन सुन, तर पनि प्रत्येक सुरक्षित भवन लागि स्टारडस्ट को 500 एकाइहरु प्राप्त हुनेछ। अधिकतम एक खेलाडी यसलाई प्रति दिन लगभग 100 सिक्का छ रूपमा, 10 कोठा सम्म कब्जा गर्न सक्छन्। त्यसैले "Pokemon जाओ" मा सिक्का कमाउन कसरी यस्तो विधि पर्याप्त लाभदायक छ। तर जब सम्म तपाईं एक अधिक वा कम गम्भीर स्तर पुग्न, वा शक्तिशाली Pokémon फेला, तपाईं कोठा एक्लै राख्न सक्षम हुने छैन मनमा राख्नुहोस्। त्यसैले यसलाई किनभने टोली रक्षा र अनुभव ठूलो सुरक्षा दिन्छ र वस्तु सुविधा, राम्रो obzavedites मित्र हो।
कसरी "Pokemon जाओ" मा सिक्का कमाउन। हैकिंग बग, र अन्य "आकर्षण"
नेटवर्क मा, त्यहाँ डाउनलोड हैकिंग "Pokemon जाओ" कार्यक्रम को लागि धेरै प्रस्ताव हो। तर प्रायजसो, यी पूरक आफ्नो ग्याजेट बिगार्न सक्छ बस किनभने Pokemon जाओ - एकदम गम्भीर परियोजना र "कारीगरों" निकट भविष्यमा यो "दरार" गर्न सक्षम हुन असम्भाव्य छन्। निःशुल्क सफ्टवेयर को कुनै pokekoinsam आज अवस्थित छैन, त्यसैले needlessly जोखिम छैन। गर्न मात्र तरिका सुन खानी, ऊर्जा expend गर्न आवश्यक नगर्ने - प्रति दिन 20 सिक्का ल्याउँछ जो खेल, को एक दैनिक सेवन। यो हामी हाम्रो समीक्षा निष्कर्षमा पुग्न, र तपाईं Pokémon को दुनिया मा नयाँ आविष्कारहरू र रोमाञ्चक साहसिक इच्छा।
तपाईं उम्कन पर्छ: गाइड
खोजहरू "Skyrim": "फेंग Kavozeina"।
परभक्षी को खेल लीग: हाइड "Ezreal"। हाइड नायक Ezreal (Ezreal): वर्णन, खण्डमा र समीक्षा सुविधाहरू
कुलीन खतरनाक: इष्टतम प्रदर्शन को लागि सिस्टम आवश्यकताहरु
कसरी "Maynkraft" मा आगो बनाउन र कसरी प्रयोग गर्ने
GTA 5: हतियार कहाँ फेला पार्न र कसरी परिवर्तन गर्ने? GTA 5: हतियार लागि Cheats
किन Agutin छोरी आफ्नो नाम वहन गर्छ?
क्युबा होटल पर्यटकहरु सबै विभाग लागि
माल्टा गर्न भिषा रूस लागि: कागजात, प्रोफाइल, लागत, र डिजाइन। के माल्टा एक भिसा चाहिन्छ?
डाउनलोड गर्न जहाँ एक समीक्षा: के हो "रेखा"
मिश्र, होटल क्लब प्रवाल होटल 4: तस्बिर र समीक्षा